Izikebhe PVC athandwa kakhulu namuhla. Avame esetshenziswa abadobi. Nokho, izinga lokwehla kwamandla emali yomkhiqizo ngesandla - kuwumsebenzi onzima. Ngakho-ke, kufanele zizithengele PVC izikebhe kagesi. Ngeke sifishane sikhatsi uzotshala umkhiqizo, akhulule usuka umsebenzi onzima.
Izinzuzo idivayisi emelelwa
Kufanele kuqashelwe ukuthi idivaysi has izici eziningi ewusizo:
- ukusebenza (kungaba kufuthwe imikhiqizo ngokwanele ezinkulu usayizi esikhathini esifushane);
- usizo (futha enjalo ingase isetshenziselwe ukuze kufuthwe neminye imikhiqizo irabha, ezifana isondo yezimoto);
- ikhono ulungise amandla nesivinini;
- ezihlukahlukene imifanekiso;
- ngemali ephansi (umuntu ngamunye angathola umshini ofanele ngentengo);
- kungenzeka ukusebenza we-AC noma ibhethri (inhlobo yedivayisi yesibili kungathatha ngemvelo, lapho umthombo wamandla alikho);
futha Electric for PVC izikebhe kungenzeka anemisila imisebenzi eyengeziwe, isib, ratchet, okuvumela kudivayisi efanayo ukumpompa umkhiqizo, kuphunywe emoyeni yilo.
Lesitshalo netimphawu ukusetshenziswa kudivayisi
lokubolekwa Kwethulwa ngokuvamile uhlukanise nhlobo amaqembu amathathu ngesisekelo ukuqinisekisa ingcindezi ezidingekayo: ongaphakeme, aphakathi nendawo kanye eliphezulu. PVC ngwenya kagesi yohlobo yokuqala kungaba ngokushesha ulele iraba sihloko. Ingcindezi, esihlinzeka thuluzi ngokuvamile akwanele, Ngakho-ke kubalulekile ukuba ngaphezu kwalokho usebenzise ezinye izinhlobo amaphampu (unyawo).
Ukuze wenze isikebhe ulele ngokushesha futhi kangcono, sebenzisa kwezinye izinhlobo zamadivayisi. Ngokwesibonelo, labo okungenzeka ukuhlinzeka umfutho ophakeme futhi naphakathi (ngokuvamile angase afinyelele amanani kufike ku-800 mbar). Isici esikhethekile kule divayisi ukuthi akudingi zokuqapha womuntu njalo. Odinga ukukwenza - ukubeka ingcindezi kunesidingo.
PVC izikebhe kagesi ongasebenza ngamandla we-AC noma ibhethri. Uhlobo lokuqala kunezinzuzo ngaphezulu. Ngokwesibonelo, akudingeki ukuba njalo ukushintsha amabhethri noma ebayala. Nokho, amadivaysi inethiwekhi ayikwazi ukusetshenziswa ezindaweni lapho kungekho khona lwenethiwekhi inethiwekhi. Kufanele kuqashelwe ukuthi ibhethri kungenzeka esikhiphekayo noma ihlanganiswe. Kukhona imodeli ukuthi kungenziwa kalula icala futhi inikwa amandla yi ibhethri imoto.
Ukuze isizini ngayinye hhayi ukuthenga amaphampu ukuze PVC izikebhe, intengo okuyinto ku ezahlukene dollar angaphezu 20-150, zama ukukhetha imodeli kwesokudla. Sichaza wayefisa kudivayisi umthamo nokucindezelwa okunganikeza ke. Ngokuvamile, nalezi zindlela incike ubukhulu isikebhe.
Futhi khumbula ngenkathi kukhethwa kudivayisi yokukhiqiza impahla ngoba kuthinta nokuqina namandla abo. Iphuzu elibalulekile futhi umthombo wamandla iyunithi. Uma uvame ukuvakashela idolobha, uzoyithanda imodeli ku ibhethri, noma omunye ezofakwa kusuka emotweni.
A option omkhulu kungaba futha ukuthi ine ezengeziwe reverse umsebenzi. Ngokwemvelo, ukukhetha kuncike kumadivayisi kuboniswe value abo. Ngokuphathelene umenzi, ezivamile amaphampu kagesi for PVC zikebhe ngokuthi "Bravo". Ziyakwazi izinga okusezingeni eliphezulu kakhulu futhi kuyasebenziseka. Ngokwemvelo, ukuthenga imikhiqizo efana ezitolo eqinisekisiwe kuphela.
"Microbe" - ithangi ukonakala for engadini. Umgomo we operation, ukubuyekezwa
Indlela ukukhetha isigqoko Welding "chameleon"? Zokushisela nezigqoko "chameleon": design, izinhlobo, isicelo
Ukushisa for amalahle amanzi ashisayo
Generator 5 KW (diesel) nezimpendulo: Ukucaciswa
Uyini ukufakwa kwamapayipi futhi kanjani it kwenziwe
Enye impumelelo - i-BMW 530i
Umuthi 'Hemodez'. Izinkomba, imiyalelo
Asphyxia - kuyini? Izinhlobo, izici nemiphumela asphyxia
Kuyini anon? okusho
Trek 3500: incazelo imodeli kanye Ukucaciswa
Imodi efanele ngosuku ndoda wanamuhla
Citin Garden Resort Indawo abantu abajwayele 3 * (Thailand, Pattaya): incazelo ehhotela, izilinganiso
Sibheke ku incwadi iphupho. Ukufa njengoba iwuphawu ushintsho.